यौन जिज्ञासा Archives - Page 66 of 66 - Sawal Nepal
यी हुन् लाससँग सेक्स गर्ने युवती
यसमा कुनै शंका छैन कि मानिसहरु सेक्सप्रति आकर्षित हुन्छन् र शारीरिक सन्तुष्टिका लागि उनीहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउँछन् । तर, केही मानिसहरुमा सेक्सप्रति यस्तो लत पनि हुन्छन् जो अपराध गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तपाईले कहिले मृत मानिसँग सेक्स गरेको सायदै सुन्नुभएको होला त्यो पनि सुन्दर युवतीबाट । हो यस्तै घटनामा एक सुन्दर युवती अमेरिकाको क्यालिफोर्निया
पूरै कपडा खोलेर योगा गर्छिन् यी युवती, हेर्नुहोस् तस्बिरहरु
२६ वर्षीया यी युवतीले पूरै कपडा उतारेर योगा गरिन् । उनको यस्ता फोटोहरु इन्ट्राग्राममा भाइरल भइरहेको छ । उनी योगका हट पोजिसनका कारण उनी अहिले थप चर्चामा छिन् । उनको इन्स्ट्राग्राममा २ लाख ६० हजार फलोअर छन्
युवतीको यौन सम्पर्क गर्ने यस्तो अनौठो तालीका ५ पटक सम्भोग, १५ मिनेट ब्रेक… पुरा पढ्नुहोस्
कार्तीक-४, अमेरिकाकामा व्यायाम सिकाउने एक जना महिलाले वेश्यावृत्तिमा लागेको स्विकार गरेकी छिन् । यो सँगै उनले वेश्यावृत्ति गर्नका लागि आफुले अनौठो समयतालिका वा नियम मान्ने गरेको पनि खुलासा गरिन् । उनको सर्त के भने उनले एक दिनमा केवल ५ जना मान्छेसँग मात्र सेक्स गर्थिन् र एक जनासँग सेक्स गरेपछि उनलाई १५ मिनेट आराम गर्ने समय
यौन क्षमतालाई बढाउने यी १० उपाय जानी राख्नुहोस
काठमाडौं । आफ्नो पार्टर तथा आफ्नै इच्छा बमोजिम यौन सम्पर्क गर्न नसकेर हिनताबोध गर्नेको जमात समाजमा प्रशस्तै पाइन्छ । यसो हुनुमा साधारण सावधानी नअपनाउँदा हुन सक्छ भने स्वास्थ्य अवस्था विग्रेर पनि हुन सक्छ । यसर्थ यहाँ साधारण सावधानी अर्थात केही कुरामा ध्यान दिने सकिए आफ्नो यौन क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिने उपायका बारेमा जानकारी गराउन खोजेका
सेक्सको बारेमा एक दिनमा कति पटक सोच्छन् महिला ?
एजेन्सी । एक जना पुरुषले एक दिनमा सेक्सको बारेमा ३४ पटक सोच्छन् भन्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । पुरुषले एक दिनमा ३४ पटक सोच्छन् भने प्रश्न उठ्छ, महिलाको आखिर महिलाले एक दिनमा कति पटक सेक्सको बारेमा सोच्छन् ? एक पटक, दुई पटक वा प्रत्येक घण्टा ? यो सबै सोचकोविरुद्ध महिलाले पनि सेक्सको बारेमा त्यति नै
साबधान ! मलद्वारमा यौनसम्पर्क गर्दा यस्ता समस्या हुनसक्छन्ः जानी राखौ
धेरैजसोले यौनसम्पर्क भन्नाले योनि-लिङ्ग मैथुनलाई मात्र बुझछन्। यौनसम्पर्क योनि-लिङ्ग मात्र नभई मुख-मैथुन वा गुदा-मैथुन पनि हुनसक्छ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा आफ्नो यौनसाथीको गुदानलीमा लिङ्ग पसाई गरिने यौनसम्पर्कलाई गुदा- मैथुन भनिन्छ। धेरै मानिस गुदामैथुनलाई समलिङ्गी यौन व्यवहार मान्छन् तर वास्तविकता के हो भने यो समानलिङ्गी व्यक्ति तथा विपरित लिङ्गी अर्थात् पुरुष तथा महिलाबीच पनि हुन सक्छ। वैवाहिक